Umdlavuza - esinye sezifo eziyingozi iningi lesintu yesimanje. Nsuku zonke, izinkulungwane zabantu libulawa yiso. Lesi sifo uyashintsha futhi ivela. Ngaphambi umdlavuza usunificile ikakhulukazi asebekhulile. Namuhla, kusukela lesi sifo ahlupheke inqwaba intsha. Yena ongazange agodle ngisho izingane.
Kungani umdlavuza esiyingozi?
Izwe aphethwe ezihlukahlukene ocwaningweni lwezokwelapha kuhloswe ngazo ukuthi kutholakale a ikhambi umdlavuza. Usuvele unayo ukufinyelela izinto eziphathekayo. Nokho, kwaze kwaba bayonqoba ngokuphelele namanje kude. Umdlavuza - akusona isifo esisodwa. Ngaphansi kwaleli gama efihla uquqaba izifo ezidinga izindlela ezahlukene ukwelashwa. Ngesisekelo zonke izinhlobo umdlavuza - isimila amaseli angavamile angase zingene zonke izinhlaka futhi awabhubhise.
Lesisifo omshoshaphansi kakhulu. Kungaba ukuthuthukisa emzimbeni isikhathi eside ngaphandle kokukubonisa ngokwayo ngesimo izimpawu. Ngakho ngokuvamile isifo Kutholwe Wakhumbula futhi ukubhekana akuseyona kungenzeka.
Ingozi nomdlavuza ngenkohliso zisenza ezinganekwaneni eziningi. Ngokwesibonelo, phakathi ingxenye ethile sabantu abangafundile kukhona umqondo ogcwele kubantu wokuthi lesi sifo esingelapheki, futhi ngenxa yalokho akudingeki ukuba aye kudokotela. Kukhona inganekwane ukuthi umdlavuza usizo amakhambi abantu noma lwezakhamzimba. Ngakho-ke, omunye imisebenzi eyinhloko yemfundo yezokwelapha zesimanje - ukulwa nangengqondo olungalungile isimo emkhakheni yokwelapha abantu abanomdlavuza. ukholo Yabantu ku izinganekwane Ukungayikhathaleli impilo yabo kuholela ukuxilongwa sekwephuzile. Lokhu kunciphisa kakhulu amathuba okusinda.
Ukufunda ukuba simelane isifo
Februwari 4 - Usuku ekulwisaneni nomdlavuza. Yasungulwa ekuthatheni isinyathelo inhlangano yamazwe ngamazwe anikezelwe countering ukusabalala sifo ngo-2005. Ngosuku emazweni amaningi, kukhona izinyathelo ezihlose ukulwa umdlavuza. izimali Accounting ubambe ukwabelana ukukhulisa imali ocwaningweni lwezokwelapha. izikhungo ezikhethekile ukuhlela izinkulumo, imihlangano nezinye izenzakalo, ubeka phambili inenhloso imfundo izakhamuzi.
Noma kunjalo, konke lokhu okwenzekayo hhayi kuphela mhlaka-4 Febhuwari. Usuku lomdlavuza - esinye isizathu ukucabanga ngempilo yabo. Nokho, izenzakalo abazinikezele kuleli usuku, ukumboza isikhathi eside ngokwanele. Ngokwesibonelo, eminye imitholampilo umdlavuza afeze isenzo, ngesikhathi lapho wonke umuntu angahlolwa mahhala ku lamadolobha esimanjemanje kakhulu imishini kwezokwelapha.
Isihloko izinkulumo eziningi kanye nezingxoxo ochwepheshe iyona ekuhlonzweni lesi sifo. Odokotela ukuchaza izimpawu kuzokwenziwa ukunakwa. Ochwepheshe abaningi singaphoqi saziso esifubeni yonyaka X ray. Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla iMisa, ngokososayensi, kungaba kakhulu ukunciphisa izinga lokufa izifo neoplastic kwamaphaphu futhi mediastinum. Odokotela namavolontiya ahlele imisebenzi ehlukahlukene sezemfundo mhlaka-4 Febhuwari. Usuku lomdlavuza - isikhathi lapho, kube yilowo nalowo kumelwe zinakekele ulalele inhlalakahle yakho.
Insumansumane main okufanele sinqotshwe, - inganeko mayelana eziyikhulu amaphesenti ebulalayo. Namuhla, kwathiwa unesifo abantu umdlavuza bangaphila iminyaka eminingi. Kodwa lokhu kungenzeka kuphela uma kusenesikhathi isimila nendlala okuthiwa i therapy kahle. Ezinye izinhlobo umdlavuza ingelapheka ngokuphelele, ngisho nalapho aqoshwe esigabeni ngasekupheleni lesi sifo. Lezi zihlanganisa nezinhlobo ezithile lymphomas futhi leukemias, kanye nezinye izinhlobo eziningi.
Abaningi izinhlangano zamazwe ngamazwe abaphendukela ohulumeni * kukhuphula imali lechitfwa ocwaningweni lwezokwelapha kanye nokugcinwa izikhungo oncological-4 Febhuwari. Usuku lomdlavuza - ngesikhathi lapho izisebenzi zokuzithandela ukuqoqa igazi izingane umdlavuza ngamakhemikhali. Lezi zenzo ahambisana umkhankaso ulwazi zenzeka. Kukhona amaqiniso ukuthi ungavula umbono imibuthano ebanzi labantu izifo lwesimila. Medicine okhula ngokushesha, futhi nganoma yisiphi isikhathi ngomuthi omusha zingatholakala, lingaba kanjani nethonya elinamandla zokwelapha.
Kanjani futhi kungani udinga ukuphathwa kanjani?
Umhlaba Usuku lomdlavuza (February 4) - Yisikhathi ukuwusekela zokuziphatha ukuze zabasiza abathile abanomdlavuza. Abanye abantu, intsha ikakhulukazi, ukufunda uphethwe zabo, enqabe ukwelashwa ngendlela. Kuyadingeka ukubachazela ukuthi kungani ungeke ukwenze lokho. Kukhona njalo ithuba. Ngisho nasezimweni ezinzima ngendlela exakile kudingeka sihloniphe, okungenani ukuze ubone intwasahlobo, ihlobo noma ulwandle. Wonke umuntu iphupho kancane ukuthi kungenziwa igcwaliseke uma okungenani baphile isikhathi esijana kunazo. Ukuthi wonke umuntu ufuna. Ukuze ekwelapheni umdlavuza iziguli - lokho ekuphileni.
Umdlavuza kugujwa uSuku Lomhlaba Wonke (February 4) - ithuba ukutshela abantu ngaLowo bakhohlisi ngubani ukuzuza ngamashwa zabanye abantu. Bioenergy, izandla sokuphulukiswa, Abelapha ngamakhambi zonke izinhlobo - konke ezikufunayo into eyodwa kuphela: imali. Ezinye izidakamizwa Kunconywa ingasetshenziswa oluqinisayo jikelele zomzimba. Abanye (efana umpe celandine, ezithathwe ngomlomo) ngeke balimaze kuphela. Udinga ukukhuluma ngayo ngomoya ophansi futhi ngokucacile, kuyinto efiselekayo ukunikeza agumenti eqinile.
Uma indlela yokuphila enempilo
Februwari 4 - Usuku ekulwisaneni nomdlavuza. Izenzakalo ezenzeka umdlavuza isikhungo ngobukhulu ezweni ngalolo suku zingahlukaniswa izigaba eziningana:
ezezimali kanye nakwezomnotho.
Bonke kudingeka kakhulu. Ukuhlonzwa kwesifo ukuthi kungaba khulula kudlule bonke, ezinokwethenjelwa e amathuba wokuphila emkhakheni wamuva wezokwelapha. izinkulumo Sikhungo kanye nezingxoxo ukunikeza abantu ulwazi. izinkundla lwezezimali, ezomnotho kanye congresses okuhloswe ngawo ukudala base impahla kanye lobuchwepheshe ocwaningweni lwezokwelapha.
Lapho ngisho uxoxe nabantu mayelana nendlela yokuphila enempilo, kodwa ngo-February 4? Umhlaba Cancer Day - izaba ezinhle give up imikhuba emibi. Ukubhema - main "umqalisi" Umdlavuza emaphashini. Kanye nokuchichima kokuthula ukudla okunamafutha, okubabayo futhi okunosawoti kungaholela izimila pheshana emathunjini. Enye yezinto ezinkulu lesi sifo - ukukhuluphala. Ngalolu suku, iziteshi eziningi TV ungabona izimakethe kanye nezinhlelo Imininingwane-kohlaziyo ngempilo, ukusheshe kutholakale izinqubo umdlavuza nokudla ukudla okukhethekile.
Umhlaba Usuku lomdlavuza (February 4) - lokhu ithuba bacabangisise ngekusasa lakhe futhi ukuthi siphila kwesokudla.
Umhlangano we esibhedlela - imibono umhlabeleli!
Idlalwa kanjani i-GTA 5: amathiphu eziyisisekelo futhi okuncane mayelana umdlalo
Ikhishi design: indlela lolu daba?